Fanehoana ny Fahasamihafan’ny Tolona : SyriaUntold Herintaona Aty Aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2018 12:14 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2014)
Leila Nachawati dia mpiara miasa amin'ny Global Voices no sady mpikambana ao amin'ny ekipan'i SyriaUntold – tetikasa iray izay natomboka herintaona lasa izay. Mikendry ny hitrandraka ny fitantaràna ny tolona Syriana sy ireo endrika samihafan'ny fanoherana ao ilay tetikasa. Nitafatafa tamin'i Leila izahay mikasika ny fandehan'iny taona lasa iny.
Raha iny mifantoka amin'ny lafiny “géostratégiques” sy ny lafiny miaramila iny ny fampahalalam-baovao mahazatra ary tsy dia misy loatra ny fijerena ny fandrosoana anatiny ao an-toerana, mahita kosa ny vondron'ireo mpandray anjara ao amin'ny SyriaUntold fa misy ireo lafiny maro amin'ny tolona Syriana no mbola tsy voatrandraka – ary izany no antenain'izy ireo ho atao.
Rising Voices: Ahoana ny fivoaran'ilay fikambanana tao anatin'ny taona lasa iny?
Leila Nachawati :Eo an-dalam-pametrahana anay ho fikambanana izahay amin'izao fotoana izao, amin'ny fampanarahan-dalàna ny fomba fanaonay ao anatin'ny ekipa, sy amin'ny fandaminana ny zotra. Raha ny momba ny asanay indray, faly izahay mahita ny fomba famerenan'ireo sehatra maro hafa ny votoatin-kevitray, ampiasaina sy zarain'ireo mpanao gazety, mafana fo, mpikaroka ary ireo olon-kafa izay te-hahazo bebe kokoa ny tantara rehetra mifandraika amin'ny fananganana fiarahamonim-pirenena. asa avy eny ifotony, zavakanto ary famoronana ao Syria.
RV: Inona avy ny valinteny tamin'ireo votoaty navoakanareo ?
LN : Hitanay fa misy ny fahalinana amin'i Syria saingy misy ihany koa ny fanamby maro amin'ny fahatakarana ny toe-javatra ao an-toerana. Mitombo ny fisalasalana sy ny tsy firaharahiana mifandraika amin'ny fahasarotan'ny fanamarinana ireo votoaty, ny fisarihan'ireo lahateny “géopolitiques”, sns. Heverinay ho zava-dehibe tokoa ny anjara andraikitray hamenoana ny banga eo amin'ny sehatry ny asa ifotony sy ny fananganana fiarahamonim-pirenena ary ny fampifandraisana ireny amin'ny zava-misy.
RV: Inona avy ireo fanamby tsy nampoizina amin'ny maha fikambanana vaovao anareo ?
LN : Miatrika fanamby ara-teknika mifandraika amin'ny fahasarotan'ny fandrindrana ny asanay izahay, amin'ny fiheverana fa miaina any amin'ny firenena samihafa izahay ary ao Syria avokoa ny ampahany betsaka amin'ny ekipanay, izay mametraka fanamby lehibe eo amin'ny sehatry ny fiarovana ihany koa. Mitaky fiantohana fiarovana tsy tapaka ireo mpikambana ao amin'ny ekipa misy anay sy ireo vondrona miara-miasa ao an-toerana. Eo anatrehan'ireo fitomboan'ny ady amin'ny fametrahana tafika sy ny ady “géopolitiques”, misy faneriterena marobe eo amin'ny asan'ny SyriaUntold, kanefa miezaka izahay hitàna hatrany ny tanjonay, hanitatra io sehatra io ary hitoetra ho tsy mitanila araka izay tratra mba hisorohana ny fihenjanana.
RV: Inona no hitanao hitranga amin'ny hoavy ho an'i SyriaUntold ?
LN: Kendrenay ny hisian'ny Syria mitazona ny fahasamihafany sy ny harenany, mifototra amin'ny lalàna misy ary azo antoka ao ny fahalalahana maneho hevitra ka ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena matanjaka miroborobo ao. Te-ho anisan'izay fandrosoana izay izahay. Rehefa mijery ireo taona lasa ny olona, dia ho afaka hiditra ao amin'ny tahirin-kevitra manan-tantara mifandraika amin'ny hetsiky ny olom-pirenena izay manome fomba fijery hafa noho ny fijery ara-miaramila sy “géopolitique”.
RV: Inona no ifandraisan'ny SyriaUntold amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao Syria ?
LN :Tsy dia mifantoka amin'ny tantara hafa izahay, fa manasongadina ny sehatra maha olombelona, ny endrika fananganana ny fiarahamonim-pirenena, ny zavakanto sy ny famoronana izay hita soritra tamin'ny fikomiana Syriana hatrany am-piandohana ary mitoetra ao afovoan'ny hetsika sivily manerana ny firenena. Tsy miaina anaty balaonina izahay, tsy hoe tsy mifandray amin'ny zava-mitranga akory izahay, izay azo arahina amin'ny alalan'ny SyriaUntold raha ny marina, fa miaraka amin'ny fomba fijery izay mifantoka amin'ny endrika izay matetika no atao ambanin-javatra, indraindray tsy hitan’ izao tontolo izao akory. Miezaka mameno ny banga mikasika ny asa natao mba handresena ny fitomboan'ny herisetra izahay, ary hanorina indray ao anatin'ny tontolo tena saropady. Na eo aza ny fitomboan'ny herisetra sy ny fametrahana tafika, dia misy ireo tantara ireo, ary mijanona ho ampahany manan-danja amin'i Syria izy ireny.
RV: Afaka mizara tetikasa sasantsasany izay nozarainareo nandritra iny taona lasa iny ka heverinao fa tokony ho fantatry ny rehetra ve ianareo ?
LN:Ireto misy sasantsasany izay tiako asongadina (amin'ny teny anglisy ny rohy) :
Vehivavy Syriana sy ny Fitroarana : Miady amin'ny Sehatra Maro
Ao Duma ihany, lasa atao mozika fitendry ny fitaovam-piadiana
Ny Fitroarana Jerena Avy Amin'ny Mason'ireo Tanora Syriana
Ny Fiaraben'ny Fahamendrehana sy ny Fanantenana
Mijere fanentanana bebe kokoa, mpanakanto sy vondrona avy eny ifotony ao amin'ireo ampahany samihafa ao amin'ny vohikalan'izy ireo, ary koa ao amin'ny tranonkala Global Voices.